About DIY Electric Skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
Pamwe yemagetsi skateboard zvinopisa uye kufarira ano vechidiki, nguva yavo yakanakisisa Electric nepakati puranga , ivo vangangoramba kuita zvimwe DIY maererano pezvatinoda. Recently I uwane dzimwe inotonhorera DIY skateboard musi Instagram.
Pace: A kunokurumidza E-longboard kuchakubatsira kubudirira kwako kuenda nguva. Inowanzotorwa nokukurumidza 30km paawa, kumusoro nokukurumidza inogona yasvika 45km paawa, enda nokukurumidza. Imwe naPauro ibhuku kuti yemagetsi skateboard achapiwa asangane zvose zvezuva nezuva komiyuta, akadai pfupi-kufamba, enda kunotenga uye zvichingodaro.
Zvinotevera ndizvo Koowheel mutengi anoratidza kuti Electric longboard Skateboard D3M kuti isu yasarudzwa musi Instagram. Ndoupi wamunoda kufanana? Vane inotonhorera uye zvakazonaka. Koowheel munhu chaizvo mufashoni yemagetsi skateboard kuti arambe wakakura nehwaro vateveri kuti vanoshamiswa nemashoko ayo kunyatsoshanda. Nei zvakadaro inopisa? Zviri Dual Brushless Hub-Motors, 7-paiva CanadianMaple Wood + regirazi faibha (optional), The Clearance ivhu iri 85mm (3.35inch), akakodzera migwagwa zvose muguta. Uyezve, replaceable bhatiri rongedza, 2pcs bhatiri packs it hunogara 60km, enda yakareba. Saka taiva zvepamusorosoro uye ndave stoked kana pashure yasvika.
Pamunoona zvinhu zvakasikwa DIY, Une zvakawanda yakasiyana pfungwa mupfungwa dzako? pfungwa dzakawanda vakasikwa nevanhu, unogona kuratidza pfungwa dzenyu akasiyana napo uye tapota tisazovakumbira kubudikidza Tag Koowheel musi Instagram wako. Koowheel mukuru Website uye Facebook vachabatsirana yenyu KOOWHEEL ruzivo.
Vakasagona parwendo, asi vakadzidza munguva pfupi nguva. Izvi zvinhu zvachose hoot kuona ringa. Torai newe uri mabhazi uye kuchovha pamusoro wako nenzira dzokugara. Munguva ichangopfuura, Koowheel yakatanga 2nd Generation Electric Skateboard Kooboard pamwe replaceable nemavhiri. Zvino preorder aigona kugamuchirwa. Pamwe muchakumbira kuti chii chiri chitsva 2 nd it chizvarwa chimwe? Rega ndikuudze nokuda pazasi.
2. New kure
3. New Motors / Makumbo
97MM Motors / Wheels
New 350W X 2 Motors pamwe Replaceable PU nemavhiri
Unique magadzirirwo kuchabatsira Motors kutonhora maximumly
connectors Itsva bhatiri vasingatongi unobva nyaya
New chirongwa achadzivirira bhatiri kubva pamusoro mhosva nokuda rokuzvivandudza rakaita kuti irambe braking. Ipapo Kooboard achaita ichipaza zvishoma uye chemabhazi. New eonikisi uriri & Grip Tape, uye more ...
Post nguva: Sep-22-2017